श्रीमान् मन्त्री बनेको दुई दिनपछि श्रीमतीको गयो पद - Mountain Media
श्रीमान् मन्त्री बनेको दुई दिनपछि श्रीमतीको गयो पद
Mountain Media June 7, 2021 1 min read
काठमाडौ । केन्द्रमा भएको राजनीतिक हलचलको असर प्रदेश राजनीतिमा पनि परेको छ । आइतबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ४ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरे । केन्द्रमा देखिएको जसपाको राननीतिक हलचलको प्रभाव प्रदेश २ मा परेको हो । उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल र राज्यमन्त्रीहरू डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डललाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री राउतले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका चार जनालाई पदमुक्त गरेका हुन।
जसमा एउटा जोडीको अनौठो संयोग बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबाट हटाइएकी डिम्पल झा ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाकी पत्नी हुन्। अनिल झाले गत शुक्रबार मात्रै खानेपानीमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। ठाकुरले सहमति विपरीत १० जनालाई संघीय सरकारमा मन्त्री बनाएपछि यादव पक्षले प्रदेश सरकारबाट ठाकुर पक्षलाई हटाएका हुन्।
झण्डै जसपाकै जस्तो दृश्य एमाले पनि देखिएको छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे। त्यही दिन उपप्रधानमन्त्री महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतो पदमुक्त भइन्। महतोले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङकी पत्नी उषाकला राई प्रदेश १ सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री छन्।
Previous: अनलाइन क्लासवाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच बस्यो प्रेम,गरे विवाह
Next: के तपाँईलाई थाहा छ ? नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई प्रतिदिन १५ हजार दिन्छ? सबै लाई Share गर्नुहोला
नेपालीले आफ्नो ‘प्रतिभा’ बुझ्न नसकेको विजय शाहीको गुनासो
फेसबुकमा पर्‍यो लभ, जब भेट्न पुगे युवा युवती, देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल?
शनिवार देखी फेरि लकडाउन सुरु हुँदै
विजनेश पार्टनरलाई बचाउँदा बिनिता चौधरीले संसार छोडिन्, भोली पल्ट घर फर्कन तयार पारेको झोला कोठामै थियो